Iyo Wheelchair yeMagetsi Yeakanaka Kunze Kwekunze Kuita
Iwe uchawana akawanda emagetsi emagetsi mavhiripu pamusika mazuva ano. Simba remagetsi wiricheya inopa kunoshamisa kwekunze mashandiro uye kudzorera zvishoma kuzvivimba kune mushandisi.
Izvi zvinoreva kuti munhu anogona kuenda kunze uye pasina kuda kushandisa ruzhinji kutakura kana masevhisi etekisi kuenda kwese kwese. Simba remagetsi sachigaro rinogona kuenda nekukurumidza uye riine hurefu hwakareba.
Mutambo unoita basa rakakosha muhupenyu hwevanhu hwezuva nezuva uye kuwana yemagetsi modhi inoita kuti iwe ugone kutora chikamu mune zvemitambo zviitiko. Ivo vakasimba, vane simba uye vakasimba kupokana nekugogodza kuzhinji uye mabhureki. A sikuta yemagetsi inopa zvakanakira a wiricheya yemawoko, asi pasina kuda mumwe munhu kuti arisundire.
Electric mavhiripu Yevanhu Vasingakwanise Kuzvifambisa
Kune avo vane matambudziko nemuviri wavo wepamusoro ipapo yemagetsi emagetsi modhi inogona kunge yakakwana. Inopa rutsigiro rwemuviri wepamusoro pasina kuda rumwe rubatsiro. Aya marudzi ezvigaro akavimbika, akasununguka uye nyore kushandisa. Mimwe mienzaniso inouya yose nevanokwira padanho pamwe nemamwe mabasa.
Kuve neakadai wiricheya inokutendera kuti ubude wega pasina kuda kuti chero munhu akusundidzire, izvo zvakanaka. Iwe unogona kutonakidzwa nenzira dzakashama uye uve nenguva inonakidza neiyi. Kune akasiyana marudzi uye dhizaini aya akasarudzika macheya kuti aoneke ega ega.
Kunatsiridza Kwakaitwa kuMagetsi wiricheya Technology
Ukangotenga magetsi emagetsi wiricheya, iwe zvechokwadi unofanirwa kufunga nezvepanyama uye zvebudiriro nyaya senge yakanaka mamiriro, kubatana uye kuona kunoonekwa.
Sachigaro wemagetsi emagetsi akagadzirisika zvakanyanya kubva munzira yayaimboita uye chigaro chemanyorerwo haisi yekutanga sarudzo zvakare. Mazhinji emamodeli anosanganisira mawaranti, mota dzemagetsi uye hupenyu hwebhatiri hwakagadziridzwa zvakanyanya.
Kune mhando mbiri dzemagetsi emagetsi dzinowira mune zvakajairika; uye yakanamatira zvigaro zvekugara. Mhando dzakajairika dzakafanana nemaoko mavhiripu, asi vane motorized system uye bhatiri remagetsi.
Yakagadziriswa zvigaro mamodheru anoita kunge akafanana modular mavhiripu ine magetsi emagetsi ezasi chikamu uye yakanamirwa pekugara system. Aya marudzi anowanzo kuve neakasiyana nhanho pamwe nekutsenhama uye tilt basa.